सडक सुधार : विश्व बैंक र एडीबीको रू. ४२ अर्ब सहयोग
काठमाडौं । दुई ठूला बहुपक्षीय दाता विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालमा सडक विस्तारका लागि रू. ४२ अर्ब सहयोग गर्दै छन् । एडीबीले बुधवार पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नतिका लागि करीब २२ अर्ब (१९ करोड ५० लाख डलर) रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकमार्फत नागढुंगा–मुग्लिन सडक सुधार तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत ढल्केवर–पथलैया खण्ड विस्तारका लागि २० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको सम्झौता अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।
एडीबीका अनुसार हालको पोखरा–मुग्लिन सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नतिका लागि ऋण स्वीकृत गरेको हो । कुल लागत २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको यस आयोजनामा नेपाल सरकारले ६ अर्ब ६६ करोड लगानी गर्नेछ । यस सडकको स्तरोन्नतिले अन्तरराष्ट्रिय बजार, विशेषगरी भारतसँग नेपालको फराकिलो गेटवे खोल्नुका साथै पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रमा पर्यटक आगमनलाई थप सहजीकरण गर्ने एडीबीले बताएको छ ।
‘यस आयोजनाले पोखराबाट जोडिने सडकको ट्राफिक क्षमता, विश्वसनीयता र सुरक्षामा अभिवृद्धि गर्नेछ,’ एडीबीका यातायात विशेषज्ञ जोहान जियोगेटले भने, ‘चार लेनमा विस्तार हुने राजमार्गले यात्रा अवधि र खर्च घटाउनुका साथै स्थानीय बजारको पहुँचमा सुधार ल्याउनेछ ।’
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले अबको २ हप्तामा पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नतिको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । उनका अनुसार यो सडक खण्डको डिजाइन सम्पन्न भइसकेको छ । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गर्न ३ महीना लाग्छ त्यसपछि काम अगाडि बढाउने योजनामा छौं,’ शर्माले भने ।
करीब ८० किलोमीटर यो सडक खण्डलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाउने तयारी विभागको छ । पहिलो चरणमा आँबुखैरेनीदेखि पोखरा चार लेनमा विस्तार हुनेछ भने दोस्रो चरणमा मुग्लिन–आँबुखैरेनी खण्डमा काम हुनेछ । आँबुखैरेनी पोखरा करीब ८१ किमी दूरी छ भने आँबुखैरेनी–मुग्लिन करीब ८ किमी छ । यो सडक निर्माण कम्पनीलाई दिएपछि ३ वर्षभित्र तयार भइसक्नुपर्ने विभागले बताएको छ । सडक निर्माण र हस्तान्तरणपछि ५ वर्षसम्म त्यसको मर्मत सम्भारको जिम्मा ठेकेदार कम्पनी आफैले लिनुपर्ने छ ।
त्यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा नागढुंगा–मुग्लिन सडक सुधारका साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत ढल्केवर–पथलैया खण्ड विस्तार हुने भएको छ । यी दुई सडक सुधारका लागि विश्व बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले केही वर्षअघि पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । विश्व बैंकले गर्न लागेको सहयोग यसै अन्तर्गत हो । सो राजमार्गकै नारायणगढ–बुटवल खण्डको स्तरोन्नतिका लागि एडीबीको सहयोगमा काम अगाडि बढाइसकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तारका लागि ऋण सहायताबारे अर्थ मन्त्रालयले १ महीनाभित्र विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको बताए । उक्त सडक खण्ड आगामी जनवरीदेखि विस्तार थाल्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ ।
अबको १ महीनाभित्र ऋण सम्झौता गरेर टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का दिने तयारी सडक विभागको छ । करीब ९३ किलोमीटर लम्बाइको यो सडक ३ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । यो सडकको डीपीआर, डिजाइनसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत तयार भइसकेको छ । यसअघि नारायणगढ–मुग्लिन खण्ड सडक विस्तारका लागि विश्व बैंकले सहयोग गरेको थियो ।
सडक विभागका अनुसार मालवाहक ट्रक बिग्रँदा तथा सडक समस्या आइपर्दा अन्य सवारीसाधन सजिलै पास हुन र ओभरटेकसमेत गर्न सहजके लागि नयाँ ढंगबाट सडक विस्तार अगाडि बढाएको हो । हाल उक्त क्षेत्रमा सडक साँघुरो र उकालो भएका कारण कुनै सवारी साधन बिग्रिए लामो समय जाम हुने र सवारी चल्न अवरोध हुने गरेको छ ।